Asa fanaovan-gazety Ny CUA no niantoka ny vatampaty sy ny fiara nitondrana an’i Jacob
Maty am-perinasa teo am-piandraiketana ny serasera sy ny fampitam-baovao (attaché de presse) teo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) i Jacob Haingonirina. Tonga nanatanteraka famangiana ny mpiasa maroben’ny CUA izay notarihin’ny Lefitra voalohan’ny ben’ny tanàna, Olivier Randrianarisoa.
Ny Kaominina Antananarivo Renivohitra no nandray an-tanana ny vata sy ny fiara nitondrana ny razana hihazo an’i Vohipeno, omaly talata atoandro. Tonga niondrika teo anatrehan’ity mpilaza vaovao ity ihany koa ireo mpanao gazety maro notarihin’ny holafitry ny mpanao gazety sy ny Talen’ny Radiom-pirenena Malagasy. Raha tsiahivina, nodimandry ny alin’ny alahady 7 jona teo ny namana mpanao gazety Haingonirina Jacob. Resaka fahatapahan’ny lalandra no nahavoa azy. Naiditra hopitaly teo Befelatanana ary niafara amin’izao famoizany ny ainy izao. Teo am-piezahana hanitatra ny ambaindain’ny fahalalany sy hampiakarany ny maripahaizana ilaina amin’ny marikarama amin’ny maha mpiasam-panjakana azy izy izao nindaosin’ny fahafatesana izao. Anisan’ny namatsy vaovao tamin’ny haino aman-jery maro i Jacob Haingonirina, anisan’izany ny Tia Tanindrazana.
« Patraona omby »
Hain’ity mpanao gazety ity avokoa ny fifandraisana hatramin’ny any ambany ravinkazo hitrandrahana vaovao sy ireo manampahefana ambony. Izay no anisan’ny nahafeno ny hafatra tao anatin’ny «gazety boky Trandraka faha-2» niarahana tamin’ny Unesco ka nahazoany ny laharana voalohany. Mpanao gazety efatra no nitrandraka mikasika ny « Halatra omby. Kolikoly avo lenta, anjakan’ny dahalo ambony latabatra ny tanàna», anisan’izany i Seheno, Tahiana ary ny mpanao gazetinay. Io no nahatonga ny anaram-bositr’i Jacob ho « patraona omby ». Teo ny fitetezana ny faritra andrefan’i Madagasikara fisokirana vaovao tamin’ny dahalo sy ny fandalovana ireo minisitera voakasika, indrindra ireo veterinera sy delegem-panjakana ary ny mpitandro filaminana izay voatonontonona tamin’io dahalo ambony latabatra io. Tsangambaton’io trandraka 2 io ny “puce” ana omby hiadiana amin’ny tsy fandriampahalemana. Ny ekipan’ny Gazety Tia Tanindrazana iray manontolo dia miray fo sy miombona alahelo ary mirary fiononana feno ho an’ny fianakavian’i Haingonirina Jacob.